Warshad Xashiishad Oo Laga Helay Bartamaha London • Dawooyinka Inc.eu
Warshada Cannabis ayaa laga helay bartamaha London
Ma horumarro cusub ayey ku soo kordheen wareegga dambiyada mise waa dhacdo uun? Iyada oo ay aad u yar yihiin dadka dariiqa dartiis dartiis, dambiga daroogada ayaa ku gabanaya. Aagga cidlada ah ee London, 'warshad xashiish' ayaa laga helay in ka badan 800 oo dhir xashiishad ah oo lagu qariyey dhulka hoostiisa.
1 Warshada xashiishadda ee magaalada cirfiid
2 Xashiishadda Corona
3 Lobby sharciyeynta
Waxaad u badan tahay inaad ku aragtid howlahan aagag badan maxaa yeelay aafada cudurka macnaheedu waa inay aad u yar yihiin dadka wadada maraya, sidaas darteedna indhaha iyo dhegaha, oo u kuurgalaya dhaqdhaqaaqyada hadhka leh. Taasi waxay siineysaa dambiilayaasha lacag la’aan.
Warshada xashiishadda ee magaalada cirfiid
Aasaasida hawl gocasho ah oo aan la arkin mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu mashquulka badan ma sahlana. Magaalo aan caadi ahaan waligeed seexan ayaa hadda ah goob lagu ciyaaro dembiilayaasha. Toddobaadkii la soo dhaafay, saraakiisha bilaysku waxay ogaadeen sagxad si buuxda u qalabaysan oo leh nalalka, dhuumaha hawo-qaadka ee dhisme ganacsi oo aan ka fogayn Baanka England. Udgoon xoogan oo lama degaanka sudhay ayaa ku kallifay inay daba galaan hawlgalka sharci darrada ah ee xashiishka. Sida laga soo xigtay Booliska Magaalada London tani waa markii ugu horaysay ee laga helo beer xashiishad ah degmada maaliyadeed ee magaalada.
Magaalada London, sida loogu yeedho degmada dhaqaalaha, way faaruqday. Dawladda Ingiriiska ayaa isku dayeysa inay joojiso mawjadaha dacwadaha corona. Nooca Ingriiska ee Virus-ka ayaa looga baqayaa Yurub wuxuuna horseeday in bandow lagu soo rogo Holland, iyo kuwo kale. Ka shaqeynta guriga waa ka caam badan tahay waligeed, aagga u roge degmo cirfiid. Muuqaal murugo iyo kala fogayn ku leh mid ka mid magaalooyinka ugu mashquulka badan adduunka. Aagga loo yaqaan 'Square Mile', halkaasoo Bankiga England, Suuqa Sarrifka London, iyo shirkadaha kale ee maaliyadeed ay isku urursan yihiin, dambiyada daroogada ayaa ah kuwo aan caadi ahayn. Afhayeenad uhadashay Magaalada London ayaa sheegtay in booliska ilaaliya degmada ay sida caadiga ah wax ka qabtaan dambiyada dhaqaalaha sida khiyaanada.
Waxay ku jirtaa Ingiriiska sharci daro in la beero, la iibiyo ama loo isticmaalo xashiishka ujeedooyin madadaalo. Gaarsiinta ama haysashada daroogada waxay sababi kartaa ilaa 14 sano oo xabsi ah, ganaax, ama labadaba. Booliska ayaa sheegay in labo qof loo xiray baaritaanka socda.
Kooxaha xashiishadda Pro iyo bukaanjiifka qaar ayaa u ololeeyay inay aqoonsadaan astaamaha caafimaad ee xashiishka. Laga bilaabo 2018, dhakhaatiirta waxaa loo oggolaan doonaa inay sharci ahaan u qoraan marijuana ujeeddooyin caafimaad. Isticmaalka daroogada xashiishadda ku saleysan waxaa loo oggolaaday inay adeegsadaan Adeegga Caafimaadka Qaranka (NHS) ee England iyo Wales sannadka 2019.
Guddi ka socda Qaramada Midoobay ayaa u codeeyay bishii Diseembar in dib loogu qoondeeyo marijuana caafimaad daroogo ka khatar yar. Go'aan muddo dheer la sugayay oo muddo dheer dib loo dhigay oo dad badani aaminsan yihiin inay wadada u xaari karto ballaarinta cilmi baarista marijuana iyo adeegsiga caafimaadka.
Akhri wax dheeraad ah nytimes.com (Source, EN)
cannabisbeerista cannabisFayras CoronadembiBoqortooyada Ingiriiska
Dad badan oo marijuana ah ayaa u jeestay daroogada sababo la yaab leh: tababarka shidaalka
Inta badan dadka Mareykanka ma helaan jimicsi ku filan - sababo kala duwan awgood. Baarayaasha qaar ayaa ...
Bilowga xashiishadda cannabis ee Kanada waxay keentaa 2,2 milyan si ay u soo saarto beerkeedii ugu horreeyay ee dhabta ah
Noocyada bilowga ah ee Kanada, oo ku takhasusay cabitaanka xashiishadda, ayaa ka ururiyey 2,2 milyan oo doolar Canadian ah ...